Matelaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare oo muran ka taagan | KEYDMEDIA ONLINE
Matelaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare oo muran ka taagan
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan meel-mariyay qaraar 13 kursi loogu qoondeeyay gobolka Banaadir Aqalka Sare ee Baarlamanka soo socda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Go'aankii Gollaha Shacabka ee metalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare ayaa dhaliyay khilaaf cusub xili wadanka uu ku jira xaaladda kala-guur ah iyo kala qeyb-sanaan saamileyda siyaasadda.
Xildhibaanada ayaa qaarkood soo jeediyay in metalaadda Muqdisho laga hormariyo maqaamka caasimadda, halka kuwa kale ay taageereen kuraasta la siiyay Muqdisho, balse waxaa muran uu ka taagan yahay sidii shacabka degan Magaaladda u qeybsan lahaayeen qoondada.
Cod loo qaaday 27-kii June 2020 meel-marinta xeerkan ayaa 142 mudane waxa ay ogolaadeen in gobolka Banaadir uu qoondo 13 senator ah ku yeesho Aqalka Sare. 4 mudane ayaa ka soo horjeesatay meel-marinta xeerkan.
Dooda 13-ka kursi ayaa kamid ahayd ajandiyaasha ugu adag ee horyaallay Gollaha Shacabka, oo ku kala qeybsanaayeen Xildhibaanada. Gudoomiye Mursal ayaa sheegay in dadka ku nool Muqdisho oo saddex milyan ka badan aysan fileynin in maqaamkooda mudo dheer laga doodo.
Puntland ayaa kasoo horjeysatay maqaamka Muqdisho, halka maamullada kale oo Galmudug kamid tahay ay soo dhaweeyeen.
Ansixinta kuraasta Muqdisho ee Aqalka Sare ayaa lagu soo beegay xili Xaliima Yareey ay ku dhawaaqday inaysan dalka ka dhici karin doorasho November 2020, iyadoo dalbatay 13 bilood oo dheeraad ah in la siiyo Gudiga doorashooyinka si loo qabto doorasho qof iyo cod ah.
Xisbiyada siyaasadda iyo maamullada waxay ku tilmaameen warka Xaliima Yareey mid lama filaan ah, oo mudo korarsi sharci darro ah loogu sameynayo Farmaajo iyo dowladda uu hogaamiyo oo waqtigooda xafiiska ay joogayaan uga harsan 5 bilood.